အဆိုပါ 25 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း 2015: 25-21 - သတင်း Rule
အဆိုပါ 25 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း 2015: 25-21
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အဆိုပါ 25 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း 2015: 25-21” was written by Keith Stuart and Jordan Erica Webber, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 14 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ်များအတွက် 2015 12.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ကောင်းစွာ, it’s almost Christmas, that wonderful time when all entertainment writers turn their thoughts, not to family and friends, but to end-of-year list features. Here then, is our traditional rundown of the year’s 25 best video games, collated by our team of experienced games writers – just before they all disappear intoafug of eggnog and carol singing.
အစဉ်အဆက်အဖြစ်, these are the titles we personally enjoyed this year, not the ones we felt were the most groundbreaking or that attracted the widest critical acclaim. It’s not objective or scientific – or fair or reasonable.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, here we go, ကနေ 25-21. Come back every day this week for more.
25. Soma (PC ကွန်ပျူတာ, PS4 ကို)
24. Until Dawn (PS4 ကို)
23. Lego Dimensions (မျိုးစုံသောပုံစံများ)
Activision must have known from the very first days of Skylanders that Lego would eventually make its own game in the toys-to-life genre, and that it would be much better. နောက်ဆုံးတော့, these aren’t just toys, they’re toys that fit into an existing longstanding category of toys, and they’re toys the players get to build themselves. Add to that the inclusion of multiple franchises, withasilly story that weaves through several of them, and this is the best Lego game yet, အထူးသဖြင့် (as always) when played withafriend.
22. Mushroom 11 (PC ကွန်ပျူတာ / Mac က)
Mushroom 11 ဓါတ်ပုံ: Untame
21. Ori နှင့်မျက်စိကန်းသောသစ်တော (Xbox One မှာ)
Ori နှင့်မျက်စိကန်းသောသစ်တော ဓါတ်ပုံ: Microsoft က
The Guardian ကဂိမ်းများ '' တစ်နှစ်တာ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း '' ကြာသပတေးနေ့ညဦးယံအချိန်ပေါ်တွင်ဂါးဒီးယန်းရဲ့ဖြစ်သူ Scott Room ၌ရာအရပျကိုယူပြီးနေသည်, 7-8.30ညနေ. Keith Stuart featuring, စာရေးဆရာများကိုရှိမုနျပါကင်နဲ့ Cara Ellison နှင့်ဂိမ်း developer များက Mike Bithell, ကျနော်တို့ပြန်ကြည့်မယ် 2015, with mince pies andagiant Xmas tombola! ဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်လက်မှတ်တွေ.
← အမေဇုံဘေးကင်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုကျော် hoverboards ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့ အဆိုပါ 25 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း 2015: 20-16 →